Luka Modric Oo Heshiis Cusub U Saxeexay Real Madrid Isagoo 35 Jir Ah - Laacib
HomeSuuqa Kala IibsigaLuka Modric Oo Heshiis Cusub U Saxeexay Real Madrid Isagoo 35 Jir Ah
Luka Modric Oo Heshiis Cusub U Saxeexay Real Madrid Isagoo 35 Jir Ah
April 16, 2021 Abdiwahab Ahmed Suuqa Kala Iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka La Liga 0
Real Madrid iyo Luka Modric ayaa gaadhay heshiis cusub oo sannad ah oo uu 35 jirkani kusii joogi doono caasimadda Spain ee Madrid.
Kubbad-sameeyahan ayuu qandaraaskiisa hore ku ekaa dhamaadka xilli ciyaareedkan, laakiin wada-hadal muddo u socday ayaa waxa la iskula meel-dhigay qandaraas cusub oo socon doona illaa dhamaadka xilli ciyaareedka dambe ama badhtamaha 2022.
Bandhigga cajiibka ah ee uu xiddiga reer Croatia samaynayo xilli ciyaareedkan ayaa ku qanciyey kooxda in ay sannad kale ugu kordhiso heshiiskiisa oo ay bilo kooban ka hadhsanaayeen.
Modric ayaa sidoo kale doonayay in uu sii joogo Real Madrid oo uu muddo kale kasii hoos ciyaaro Zinedine Zidane, isagoo ogolaaday in uu mushaharkiisana hoos u dhigo maadaama dhaqaalaha kooxdiisa uu liiciyey fayraska Korona.
Marka heshiiska si rasmi ah loo shaaciyo, Modric ayaa isku diyaarin doona in uu sannadkiisii tobnaad ku qaato Real Madrid iyo in uu sii joogo illaa inta ay da’diisu ka noqonayso 36 jir.
Laacibkan oo sannadkii 2012 ay Real Madrid lacag dhan €35 milyan oo Euro kaga soo iibsatay Tottenham ayaa waxa uu u saftay 383 ciyaarood, isagoo dhaliyey 26 gool, sidoo kalena caawiyey 61 gool oo ay asxaabtiisu dhaliyeen.
Waxa uu muddadaas kula guuleystay afar Champions League, laba horyaalka LaLiga ah, hal Copa del Rey iyo afar koob oo Club world Cup ah.
Sannadkii 2018 ayaa loo doortay xiddiga ugu wanaagsan dunida, isagoo ku guuleystay abaal-marinta Ballon d’Or, kaddib markii uu kooxdiisa ka caawiyey in ay ku guulesato Champions League sannadkii saddexaad oo xidhiidh ah, isla markaana uu qarankiisa geeyey finalka Koobka Adduunka.
Xilli ciyaareedkan socda ayaa la moodaa in uu dib u dhallinyaroobay, waxaanu laf-dhabar u yahay Real Madrid isagoo isku muujiyey in uu yahay mishiinka kooxda dhaqaajinaya.
Iyadoo ay da’diisu tahay 35 jir, waxa uu ciyaaray 3,038 daqiiqadood oo u dhiganta 40 ciyaarood, waxaanay khad dhexe oo cajiib ah wada abuureen Casemiro iyo Toni Kroos.
Madrid waxay sugaysaa Sergio Ramos
Kaddib heshiiska uu cusboonaysiiyey Luka Modric, Real Madrid ayaa wali sugaysa laba xiddig oo kale oo qandaraasyadoodu ku eg yihiin dhamaadka xilli ciyaareedkan, waana Sergio Ramos iyo Lucas Vazquez. Labadan ciyaartoy ayay Real Madrid rajaynaysaa in iyaguna ay heshiisyo cusub saxeexaan, laakiin awoodda ayaa ciyaartoyda gacanta ugu jirta oo siday doonaan yeeli karaya.